Ikhaya elimangalisayo eTopusko elinamagumbi okulala ama-4, iSauna kunye neWiFi
Eli khaya lihle leholide likwindawo enkulu kwaye igcinwe kakuhle kwindawo yaseTopusko. I-Stylish kwaye inikwe ngokwesiko iya kukunika intuthuzelo kunye nokufudumala kwendlu yakho, ngelixa kwangaxeshanye ixhotyiswe ngazo zonke izibonelelo eziyimfuneko. Inamagumbi okulala amathathu, igumbi lokuhlala, ikhitshi elinegumbi lokutyela, amagumbi okuhlambela amabini kunye negalari, ngelixa ukuya kwindawo ephezulu yezitepsi ezingabafanelanga abantwana kunye nabantu abadala kwaye apho ubuncinci bobude bosilingi buyi-80cm. Ukusukela nge-1 kaMeyi ukuya kumhla woku-1 kuSeptemba onawo lichibi lokuqubha langaphandle apho unokuphumla kwaye ufumane ukuphumla ngexesha lobushushu behlobo, emva koko ungazama isandla sakho ekulungiseleleni izitya kwi-barbecue kwaye wonwabele iglasi yewayini kunye nokonwaba nabantu obathandayo. kwigadi entle. Kukho igumbi lokuzilolonga elikhoyo, kunye nesauna kunye ne-whirlpool. Sincoma ukuba u tyelele i-Top-Therme Topusko, umthombo womlambo iGlina, kunye nabathandi bendalo kukho intaba i-Nikola, ipaki i-Opatovina kunye ne-English park.
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-94 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
Imigama: indawo yokuhlala ekufutshane 100 m / ithuba lokuloba 8 km / ukuthenga 8 km / Amanye amanzi okanye indawo yokuqubha.(ichibi loluntu langaphakathi) 8 km / ivenkile yokutyela 8 km / idolophu ekufutshane(Topusko) 8 km / amanzi(Aqua Park) 8 km